Air Astana maliteghachi ụgbọ elu na-aga Georgia
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Air Astana maliteghachi ụgbọ elu na-aga Georgia
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa na Georgia • Akụkọ Kazakhstan na -agbasa • News • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Citizensmụ amaala Kazakhstan na-aga Georgia ga-eweta akwụkwọ nyocha PCR na-adịghị mma ewepụtara ihe karịrị 72 awa tupu ha abata
Air Astana ga-amalite njem ụgbọ elu ọzọ n'etiti Almaty na isi obodo Georgia nke Tbilisi
Ndị njem si mba ofesi na-abata Kazakhstan ga-enwerịrị akwụkwọ nyocha PCR na-adịghị mma ewepụtara karịa ụbọchị 3 tupu ọpụpụ maka Kazakhstan
Ndị njem njem mba ofesi na-agafe Kazakhstan achọghị ka ha nwee ule PCR
Air Astana ga-amalite ụgbọ elu ọzọ n'etiti Almaty na Tbilisi, isi obodo Georgia, na 16th March 2021, na-arụ ọrụ ugboro atọ n'izu na Tuesday, Friday na Sunday. Oge ụgbọ elu dị n'etiti Almaty na Tbilisi bụ awa 4 na 15 nkeji, na awa 3 na 40 mins na Tbilisi na Almaty.
Ndị njem si mba ọzọ ga-enwerịrị akwụkwọ ule PCR na-adịghị mma ewepụtara karịa ụbọchị 3 tupu ọpụpụ maka Kazakhstan. Enweghị ule PCR na-adịghị mma, a gaghị ekwe ka ndị njem banye n'ụgbọ elu ụgbọ elu. Ndị njem njem mba ofesi na-agafe Kazakhstan achọghị ka ha nwee ule PCR ma ọ bụrụhaala na ha anaghị ahapụ mpaghara ụgbọ elu ọdụ ụgbọ elu.
Citizensmụ amaala Kazakhstan na-aga Georgia ga-eweta akwụkwọ nyocha PCR na-adịghị mma ewepụtara ihe karịrị 72 awa tupu ha abata.
Ikuku Astana, Onye na-ebu ọkọlọtọ nke Kazakhstan, bidoro ọrụ ya na Mee 2002 dị ka njikọta ọnụ n'etiti akụ akụ na ụba mba Kazakhstan, Samruk Kazyna, na BAE Systems, nwere oke nke 51% na 49%.
Air Astana bụ onye ọrụ zuru ụwa ọnụ na nke ụgbọelu na nkewa ọnụ ala ya, FlyArystan na-eto n'ike n'ike na ahịa ụlọ. Airgbọ elu ahụ na-arụ ụgbọ mmiri nke ụgbọ elu 33 gụnyere Boeing 767, Airbus A320 / A320neo, Airbus A321 / A321neo / A321LR na Embraer E190-E2.